Faka iPop Yokuthengisa Esizeni Sakho Se-ecommerce Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 9, 2019 NgoLwesithathu, Januwari 9, 2019 Douglas Karr
Ubufakazi bezenhlalo kubaluleke kakhulu lapho abathengi benza isinqumo sokuthenga kusayithi lakho le-ecommerce. Izivakashi zifuna ukwazi ukuthi isiza sakho sithembekile nokuthi abanye abantu bathenga kuwe. Izikhathi eziningi kakhulu, isiza se-ecommerce sihleli simile futhi ukubuyekezwa kudala futhi kwakudala… kuthinta izinqumo zomthengi omusha.
Isici esisodwa ongangeza, ngokoqobo, emaminithini ambalwa yi-Sales Pop. Lesi yisigaxa esingezansi kwesobunxele esikutshela igama nomkhiqizo umuntu owuthengile kamuva nje. Ama-Sales Pops anethonya elimangalisayo kumthengi ongaba nentshisekelo kumkhiqizo osendaweni yakho kepha akazi nje ukuthi isiza sakho singathenjwa noma cha. Ngokubona ukusakazwa kokuthengwa kwakamuva okuvela kwamanye amakhasimende, bathola umuzwa wokuthi uyisayithi ye-e-commerce ethembekile.
Ukuhlela uhlelo olufana nalokhu kungaba yinselelo encane, kepha Ukufuya izinyosi wakhe ipulatifomu enamandla ehlanganisa ngokwendabuko ne-Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento, Weebly neLightspeed. Isebenzisa i-AI, iBeeketing iyakwazi ukukhomba nokwenza ngezifiso izici zayo ukwenza ngcono ukuthengiswa kwe-ecommerce jikelele.
Uma uvakashela isiza sami se-WordPress, kungenzeka ukuthi awukaze uqaphele ukuthi nginefayela le- amasevisi ingxenye. Abantu abaningi abakuqapheli ngakho-ke ngithola ukuthengisa okuncane kuphela inyanga ngayinye. Ngafaka i-pop yokuthengisa futhi emizuzwini embalwa kamuva ipulatifomu yavumelaniswa ngokuphelele. Ayigcinanga ngokuthwebula ukuthengwa kwangaphambilini, kepha ngikwazile nokungeza imikhiqizo ebengifuna ukuyikhangisa kakhulu.
Kungakapheli usuku olulodwa, ngase ngithole enye intengo!
The I-Pop Pop ubufakazi bezenhlalo hhayi ukuphela kwesici ku-Beeketing, ungangeza okumbalwa. Okuhle kunakho konke, amanani entengo aqala mahhala ukuze ukwazi ukukunikeza idrayivu yokuhlola!
Izincwajana zemininingwane Ukufuya izinyosi Izici ze-ecommerce zifaka:
Thuthukisa Ukuthengisa - Izincomo ze-Upsell ne-Cross-sell
Izincomo ezenziwe zaba ngezakho - Ncoma imikhiqizo nokwenyusa inani le-oda.
Ibhokisi lekhuphoni - Khulisa ukuthengisa ngama-popups amakhuphoni.
Phinda uthole i-Cart Pusher - izaziso zesiphequluli sokulahlwa kwenqola.
Ukuguqula Imali - Guqula ngokuzenzakalela intengo yokuthengisa kwamazwe aphesheya.
Isiguquli seselula - ukukhulisa iziphequluli zeselula.
Isikhungo sosizo se- - iwindi lengxoxo ukusiza izivakashi.
Isigijimi Esijabulisayo - ukuhlanganiswa okuzenzakalelayo kwe-Facebook Messenger.
I-MailBot - ngezimpendulo ezenzelwe wena ze-imeyili.
I-imeyili ejabulisayo - ama-imeyili okubonga avela kumnikazi wesitolo.
I-Countdown Cart - ukwakha umuzwa wokuphuthuma ekuthengiseni.
Ukukhuthaza ukuphuma - yenza abantu babelane ngabakuthengile ezinkundleni zokuxhumana.
Lapho ubhalisa, babuye bakunikeze isixhumanisi sokudlulisela… ngakho-ke nansi eyami:
Tags: inqola elahliweingxoxo ye-ecommerceizincomo ze-ecommerceisivinini esikhanyisiwesibindekileWeebly futhi Lightspeed